Hevitra momba ny Tenin'Andriamanitra | Fiangonan'Andriamanitra an'izao tontolo izao Soisa - Fiangonan'Andriamanitra andriamanitra Switzerland
Rehefa miresaka aminy momba an'Andriamanitra ny namana iray, inona no ao an-tsaina? Mieritreritra olona irery toa anao any an-danitra ve ianao? Alao sary an-tsaina angaha lahy antitra iray manana volombava fotsy sy akanjo lava? Na talen'ny orinasa mainty hoditra, araka ny aseho amin'ny sarimihetsika "Bruce Mahery"? Na ny sarin'i George Burns amin'ny maha lehilahy antitra azy amin'ny lobaka Hawaiian sy kiraro tenisy.
Misy ny olona mino fa mandray anjara mavitrika amin'ny fiainany Andriamanitra, ny hafa kosa mihevitra fa Andriamanitra misaron-tava sy lavitra, izay any ivelany ary mijery antsika "lavitra". Avy eo dia misy ny hevitra momba andriamanitra tsy mahavita izay iray amintsika fotsiny ihany, "tahaka ny olon-kafa amin'ny fiara fitadiavana mitady lalana any", toy ny ao amin'ny hiran'i Joan Osborne.
Mieritrereta fa ny Baiboly dia manondro an'Andriamanitra ho mpitsara hentitra izay manome valisoa sy sazy avy amin'Andriamanitra - sazy fanasaziana - amin'ny olona rehetra miankina amin'ny fomban'ny fiainany tsara amin'ny fiainany lavorary. Betsaka ny Kristiana no mieritreritra an'ity fomba ity - Andriamanitra Ray be fitiavana izay vonona ny handringana ny olona rehetra mandra-pahatongan'ny zanany be mpamindra fo sy mamindra fo hanome ny ainy ho an'ny olona diso lalana. Tsy izany anefa no fijerin'ny Baiboly an'Andriamanitra.
Ahoana no anehoan'ny Baiboly an'Andriamanitra?
Ny Baiboly dia manolotra zava-misy satria Andriamanitra dia amin'ny alàlan'ny solomaso: "Ny fitaratra nataon'i Jesosy Kristy". Araka ny voalazan'ny Baiboly, dia i Jesosy Kristy irery no fanambarana tonga lafatra an'ny Ray: «Hoy i Jesosy taminy: Efa ela izay no efa nitoerako teto aminao, ka tsy mahalala ahy ianao, ry Filipo? Izay mahita ahy dia mahita ny rainy. Ka ahoana no anaovanao hoe: "Ampisehoy anay ny raim-pianakaviana?" (Jaona 14,9) Manomboka amin'ireto teny ireto ny taratasy ho an'ny Hebreo: "Rehefa niteny imbetsaka Andriamanitra tamin'ny fomba maro tamin'ny razambe Andriamanitra, dia tao anatin'ny andro vitsivitsy dia niresaka tamintsika tamin'ny alalàn'ny zanakalahy izay notendreny ho mpandova izy. ny zavatra rehetra izay nanaovany an'izao tontolo izao ihany. Izy no taratry ny voninahiny sy ny sarin'ny toetrany ary mitondra ny zava-drehetra amin'ny teniny mahery ary nahatanteraka ny fanadiovana amin'ny ota ary nipetraka teo amin'ny tanana ankavanan'ny fahalehibiazana amin'ny avo indrindra » (Hebreo 1,1: 3).
Raha te hahafantatra ny endrik'Andriamanitra ianao dia jereo amin'i Jesosy. Ny filazantsaran'i Jaona dia milaza amintsika fa i Jesosy sy ny Ray dia iray. Raha malemy fanahy sy manam-paharetana ary mamindra fo i Jesosy - ary izy dia izany koa ny Ray. Ary koa ny Fanahy Masina - nirahin'ny Ray sy ny Zanaka, Izay itoeran'ny Ray sy ny Zanaka ao amintsika ary mitarika antsika amin'ny fahamarinana rehetra.
Andriamanitra tsy esorina ary tsy voafehy, olona mijery antsika eny lavitra eny. Mifandray tsy tapaka sy mifamatotra amin'ny zavaboariny sy ny zavaboariny Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Ho anao, izany dia niantso anao Andriamanitra, Ray, Zanaka ary Fanahy Masina tamin'ny fitiavana ary tia anao amin'ny fomba fanavotan'Andriamanitra mandritra ny androm-piainanao. Izy no mitari-dàlana anao hitari-dalana anao ho amin'ny tanjona farany, ny fiainana mandrakizay miaraka aminy ho iray amin'ireo zanany malalany.
Rehefa mieritreritra an'Andriamanitra amin'ny fomba ara-baiboly isika dia tokony hieritreritra an'i Jesosy Kristy, izay fanambarana tanteraka an'ny Ray. Ny olombelona rehetra - anisan'izany izaho sy ianao - dia tafiditra tao amin'i Jesosy Kristy tamin'ny alàlan'ny fatorana feno fitiavana sy fiadanana izay mampifandray an'i Jesosy amin'ny Ray. Andeha hianarantsika ny hanaiky ny fahamarinana amin'ny hafanam-po izay nataon'Andriamanitra tamin'ny maha zanany antsika an'i Kristy.